Chiedza chikuru munyika yeGarireya (1-7)
Kuberekwa ‘kweMuchinda weRugare’ (6, 7)
Ruoko rwaMwari runorwisa Israeri (8-21)
9 Zvisinei, rima racho harizoiti sezvarakanga rakaita nyika payaiva munhamo, sezvazvaiva kare paizvidzwa nyika yaZebhuroni nenyika yaNaftari.+ Asi nekufamba kwenguva achaita kuti ikudzwe, iyo nzira iri pedyo negungwa, munharaunda yeJodhani, Garireya yemamwe marudzi. 2 Vanhu vaifamba murimaVakaona chiedza chikuru. Kana vari vaya vanogara munyika yerima gobvu,Vakavhenekerwa nechiedza.+ 3 Makaita kuti rudzi rwacho ruve nevanhu vazhinji;Makaita kuti rupembere nemufaro. Vanofara chaizvo pamberi penyuSekufara kunoita vanhu panguva yekukohwa,Sezvinoita vaya vanogovana zvinhu zvinenge zvapambwa vachifara. 4 Nekuti makatyora-tyora joko ravakanga vakatakura,Netsvimbo yepamapfudzi avo, mudonzvo weanovashandisa,Sepazuva raMidhiyani.+ 5 Kana iri shangu yese inofamba ichizunguza nyikaNenguo yese izere neropa,Zvichava huni dzekuisa mumoto. 6 Nekuti taberekerwa mwana,+Tapiwa mwanakomana;Uye utongi huchava* papfudzi rake.+ Zita rake richanzi Chipangamazano Anoshamisa,+ Mwari Ane Simba,+ Baba Vasingagumi, Muchinda weRugare. 7 Utongi hwake huchangoramba huchikura*Uye kana ruri rugare ruchangoramba ruripo+Pachigaro cheumambo chaDhavhidhi+ nepaumambo hwake,Kuti ahusimbise+ uye ahutsigireKuburikidza nekutonga zvakanaka+ uye kururama,+Kubva zvino zvichienda mberi uye nekusingaperi. Jehovha wemauto uyo anoshingaira, achazviita. 8 Jehovha akatumira shoko kuti ayambire Jakobho,Uye rasvika kuna Israeri.+ 9 Uye vanhu vese vachariziva,Iye Efremu nevagari vemuSamariya,Avo vanotaura vachizvikudza nemwoyo yavo inozvitutumadza vachiti: 10 “Zvidhinha zvakawa,Asi tichavaka nematombo akavezwa.+ Mitsamvi yakatemwa,Asi tichaitsiva nemisidhari.” 11 Jehovha achaita kuti mhandu dzaRezini dzimurwiseUye achaita kuti vavengi vake vawane zvavanoita, 12 Siriya ichibva kumabvazuva uye vaFiristiya kumavirira,*+Vachadya Israeri nemiromo yakashama.+ Nekuda kweizvi zvese, kutsamwa kwake hakuna kupera,Asi ruoko rwake ruchakatambanudzwa kuti rurove.+ 13 Nekuti vanhu vacho havana kudzokera kuna iye anovarova;Havana kutsvaga Jehovha wemauto.+ 14 Jehovha achadimbura pana IsraeriMusoro nemuswe, uye nhungirwa nenhokwe* pazuva rimwe chete.+ 15 Mukuru neanoremekedzwa kwazvo ndiye musoro,Uye muprofita ari kurayiridza zvenhema ndiye muswe.+ 16 Vaya vari kutungamirira vanhu ava ndivo vari kuvadzungairisa,Uye vaya vari kutungamirirwa vavhiringidzika. 17 Ndokusaka Jehovha asingazofariri majaya avo,Uye haazonzwiri tsitsi nherera dzavo nechirikadzi dzavoNekuti vese vakatsauka uye vanoita zvakaipa+Uye miromo yese inotaura zveupenzi. Nekuda kweizvi zvese, kutsamwa kwake hakuna kupera,Asi ruoko rwake ruchakatambanudzwa kuti rurove.+ 18 Nekuti uipi huri kupfuta semoto,Huchiparadza makwenzi eminzwa nemasora. Huchabatidza moto pamabvokocho esango,Uye achatsva gore reutsi richipwititika mudenga. 19 Nekuda kwekushatirwa kwaJehovha wemautoNyika yatungidzwa moto,Uye vanhu vachava huni dzekuisa mumoto. Hapana munhu achanzwira tsitsi kunyange hama yake. 20 Mumwe achacheka kurudyiAsi acharamba aine nzara;Uye mumwe achadya kuruboshweAsi haazoguti. Mumwe nemumwe achadya nyama yeruoko rwake, 21 Manase achadya Efremu,Uye Efremu achadya Manase. Vacharwisa Judha vari pamwe chete.+ Nekuda kweizvi zvese, kutsamwa kwake hakuna kupera,Asi ruoko rwake ruchakatambanudzwa kuti rurove.+
^ Kana kuti “hurumende ichava; kutonga kwemuchinda kuchava.”
^ Kana kuti “Hurumende yake icharamba ichiwedzera simba; Utongi hwake semuchinda hucharamba huchiwedzera.”
^ ChiHeb., “kumashure.”
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “bazi remuchindwe netsanga.”